Xisbiga Kulmiye ee Ina Yuusuf iyo Faratoon idin horkeenay codkiina ha siinina | Xaysimo
Home War Xisbiga Kulmiye ee Ina Yuusuf iyo Faratoon idin horkeenay codkiina ha siinina
Xisbiga Kulmiye ee Ina Yuusuf iyo Faratoon idin horkeenay codkiina ha siinina
Gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, markii uu Madaxtinimadda Somaliland ku guuleystay wuxuu muujiyey in aanu weli ka bogsan oo ay qalbiga uga buuxdo cuqdadii uu u qabay beelaha darafyada ee uu kala yimid xashin.
Muuse islamarkiiba wuxuu weeraray degaanka Tukaraq oo uu ku baro kiciyey ilaa 12000 oo qoys.
Wuxuu ku dhowaaqay hal ku dhigiisii ahaa waxaan cayrsan jiray aabeyaashiin iyo Awooweyaashiin.
Wuxuu Nuux Taani u xilsaaray inuu caayo beelaha harti.
Waxaa markhaatiga ugu weyn ah dadka uu xukuumadiisa ku darsaday ee uu ka xushay Goboladda Sool, Sanaag iyo Cayn, kuwaas oo ah dadkii ugu liitay ama lagu shaqaysan karayey oo degaamadaas loo adeegsan karayey sida Wasiirka warfaafinta Saleebaan Yuusuf iyo kan Arimaha Dibada Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir (Faratoon).
Faratoon hadda wuu gaboobay, asalkiisii horena ma ahayn nin ku fiican Xil Agaasime guud ka sareeya, wuxuuna aaminsan yahay in markuu qanacsan yahay ay dadka Reer Sool, Sanaag iyo Cayn qanacsan yihiin.
Wasiir Saleebaan maaha nin sida jirkiisu u koran yahay ay maskaxdiisu u horumarsan tahay, waqtigiisa iyo dadaalkiisu wuxuu ku mashquulsan yahay siduu u qancin lahaa reer hargeysa, aragti dhaafsiisan inuu hargeysa qanciyo ma leh.
Waxaan shacabka Gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ee doorashada Somaliland isu diiwaangeliyey ka codsanayaa in aanay codkooda siinin musharaxiinta Xisbiga Kulmiye ee uu hogaamiyo xagjirka fogaaday, oo ay codkooda ku doortaan musharaxiinta Xisbiyada kale.
Waxaan shacabka reer Yagoori ugu baaqayaa inay codkooda ku soo saaraan Cabdirisaaq Khaliif oo ah nin bulsho kala duwan isku wadi kara, islamarkaana si fudud u fahmaaya marba xaalada lagu sugan yahay.